पुरुषहरुका लागि खुशिको खबर, पुरुषका लागि पनि आयो गर्भनिरोधक इन्जेक्सन, एकपटक लगाएपछि १३ वर्षसम्म ढुक्क
एजेन्सी। नवविवाहित अथवा विवाहित दम्पतिहरुले यदि सन्तानको चाहा तत्काल नभए कसरी सुरक्षित तरिकाले गर्भ नरहने गरि शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने केहि अन्योलमा हुने गर्दछन । गर्भ रोक्न स्थायी साधनहरुको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि महिलाको धेरै गर्भनिरोधकऔषधि पाइने गरेको थियो भने पुरुषको हकमा भने कन्डम मात्रै थियो । तर,अब पुरुषलाइ पनि सजिलो हुने गरि एउटा इन्जेक्सन प्रतिपादन भएको छ ।
भारतका वैज्ञानिकले मेल कन्ट्रासेप्टिभ इन्जेक्सनको विकास गरेका हुन् । यो इन्जेक्सनको क्लिनिकल ट्रायल पनि पूरा भइसकेको छ । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) को अगुवाइमा इन्जेक्सनको परीक्षण पूरा भएको हो । परीक्षणको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको छ । चाँडै नै यो इन्जेक्सनको प्रयोग गर्नका लागि स्वीकृति मिल्ने विश्वास गरिएको छ । आईसीएमआरका वैज्ञानिक चिकित्सक आर एस शर्माले भनेका छन् कि यो रिभर्सिबल इन्भिसन अफ स्पर्म अन्डर गाइडेन्स (आरआईएसयुजी) हो, जुन एकप्रकारको गर्भनिरोधक इन्जेक्सन हो । हालसम्म पुरुषले गर्भनिरोध गर्नुपर्दा शल्यक्रिया (सर्जरी) विधि अपनाइन्थ्यो । अब सर्जरीको झञ्झटको अन्त्य हुने भएको छ । एउटा इन्जेक्सनले नै त्यो काम गर्नेछ । विशेष कुरा त के छ भने यो इन्जेक्सनको सफलता दर ९५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुनेछ । एकपटक इन्जेक्सन लगाएपछि १३ वर्षसम्म काम गर्ने डा. शर्माको भनाइ छ । ‘१३ वर्षभन्दा पनि बढी समय यसले गर्भनिरोधको काम गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।
यो इन्जेक्सनमा प्रयोग हुने ड्रग्स आईआईटी खडगपुरका वैज्ञानिक चिकित्सक एस के गुहाले पत्ता लगाएको डा. शर्माले जानकारी दिए । यो एकप्रकारको सिन्थेटिक पोलिमर हो । सर्जरी गर्दा जुन दुईवटा नसा काटिन्थ्यो, यो नयाँ विधिमा तिनै दुई जसामा इन्जेक्सन लगाइन्छ । यही नसाबाट स्पर्मले यात्रा गर्ने गर्छ । यसमा ६० मिलिलिटरको एक डोज हुनेछ ।
इजरायलले धेरै नेपाली कामदार लाने तयारी गर्दै
सुत्नुभन्दा पहिला भुलेर पनि नखानुहोस् यी ५ चिज, यस्तो छ बेफाईदा!